Hoooyo hurud’ hurdo fiican.!!! – Radio Muqdisho
Hoooyo hurud’ hurdo fiican.!!!
Wel wel iyo walbahaar uma dhinna hooyo Soomaaliyed oo caruurteeda midkood uu ka fogyahey.
Walidiin badan ayaa ubadkooda oo ku xiran wadamada shisheeye, aadna ula walwalsan Sida xaaladooda ay tahey, iyadoo mararka qaarna loo soo waco Lacago madax furasha ah oo ubadkooda laga doonayo.
30-kii May ayay aheyd markii hooyooyin badan oo Soomaaliyeed ay hurdeen hurdo fiican kadib markii magaalada muqdisho ay soo gaareen dhalinyaro Soomaalia ah kuwaasi oo Ku jirey xabsiyo Ku yaaalla wadanka liibiya, Hoooyo hurud hurdo fiican.!!!
Dowladda Soomaalia ayaa Ku guuleysatey in hooyooyin badan oo murugeysnaa iney hurdaan hurdo fiican kadib markii caruurtooda qaarkood wadankooda hoooyo dib loogu soo celiyey.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa dhibaatooyin ay Ku haysataa xabsiyadda kala duwan eee wadamada shishiyeeye, Balse dhalintaas Maanta rajo waxa ay leeyihiin dowladd u doodi karta wadankooda in ay ka jirto, Ee Hooyo hurud hurdo fiican.
Dowladdeena waxa ay hada Ku guuleysatey in boqolaaal dhalinyaro Soomaalia ah kasoo saarto xabsiyo shisheeye oo ay Ku dhibanayeen, Kuwaasi oo hada LA nool walidoontooda oo muddo sanado ah aysan is arag ama aysan is maqlin.!!!
Dowlada Soomaaliya ayaa hada u istaagtey Sidii Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dayacan dunidda dacaladeeda ay uga soo saari lahayd xabsiyadda ay ku jiraan taaa oo hada yiddi diilo badan ku abuurtey waaalidiinta Soomaaliyeed.
Hoooyo hurud hurdo fiiican.!!!
Dowladd waa tii daryeesha Maatadeeda, Dhibkana LA qeybsata.
Qaraaar ayaa qaranleh, Qaranimo ayaaa wadan iyo dadkiisaba lagu aqoonsadaa.
By. C/risaaq Sheekh Ibraahim (Sheekeeye)
Wasiirka Cusub ee Warfaafinta oo maanta xilkiisa loo dhaariyay “SAWIRRO”
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo la kulmay Guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka "SAWIRRO"